I-UNWTO General Assembly ngoku eMadrid: UZurab Pololikashvili uyingqondi. Ngaba iSaudi Arabia iya kusabela?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » I-UNWTO General Assembly ngoku eMadrid: UZurab Pololikashvili uyingqondi. Ngaba iSaudi Arabia iya kusabela?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iiwayini kunye neMimoya
Abaphulaphuli beNdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO batshintshile nje ukusuka kubaphathiswa baya koonozakuzaku okanye ukungabonisi namhlanje, xa indawo isukile eMorocco yaya eSpain.
Ezi ziindaba ezimnandi kuNobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili, kodwa iindaba ezimbi kukhenketho lwehlabathi.
Ngaba iSaudi Arabia inganceda?
Njengoko kuqikelelwe ngu eTurboNews kunye nabangaphakathi, namhlanje i-UNWTO iyenze yaseburhulumenteni.
I-General Assembly ecwangciselwe iMarrakesh, iMorocco ukusuka nge-30 kaNovemba ukuya nge-02 kaDisemba izakuba kumhlaba onobuhlobo ngakumbi, iMadrid, iSpain
UNobhala-Jikelele uZurab Pololikashvili wasebenzisa ifuthe lakhe eMadrid eliqhelekileyo ukukhohlisa. Ukuba nokumangaliswa kweNdibano yeZizwe eziManyeneyo eMadrid kuya kutywina ubuqhetseba kunyulo, kufuneka abe nethemba.
Ukusukela oko uZurab Pololikashvili waseGeorgia ethathe ulawulo lwe Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela Nge-1 kaJanuwari 2018, umbutho waba nobutshaba kumajelo eendaba. I-UNWTO yajika yaya kuvulwa ngumbutho ongafihli nto ongafihlisiyo yaya kungena emhadini wento oliqhophololo, iimfihlo kunye nokuthula. Uloyiko lwemisebenzi lulawulwa ngaphakathi kwikomkhulu le-UNWTO eMadrid, eSpain.
Ukujongana neyona ngxaki inkulu elijongene nayo eli hlabathi kwimbali yanamhlanje, i-UNWTO ayiphenduli, ayisebenzi, ngaphandle kwaxa izuze kuNobhala-Jikelele buqu.
I-COVID-19 yayinkulu kakhulu, i-UNWTO yasinda ekukhuthazeni iwayini-ukhenketho.
Iintatheli bezilinde ngaphandle kwe-ofisi ye-UNWTO kwiNtengiso yeHlabathi yokuHamba kwi-2018 kunye ne-2019 kuphela ukuba zixelelwe ukuba uNobhala-Jikelele akakwazanga ukuya kwinkomfa yakhe noonondaba.
KwiNkomfa ye-UN ye-2019 yoTshintsho lweMozulu i-COP 2019 eMadrid, uNobhala-Jikelele we-UNWTO walithanda eli thuba lokufota kunye neentloko zikarhulumente kodwa wasuka kwindawo leyo engxamele ukuphepha nayiphi na imibuzo yemidiya okanye ezinye izinto ezazisenzeka kumsitho.
Kwinkomfa ezayo ye-2021 ye-UN yoTshintsho lweMozulu i-COP 2021 eGlasgow ngasekupheleni kwale nyanga, uNobhala-Jikelele kufuneka abonakalise ubuso. Kufuneka aqinisekise amazwe ukuba amqinisekise kwakhona njengoNobhala-Jikelele kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
KwiNtengiso yeHlabathi yeHlabathi ezayo (i-WTM) yowama-2021, uNobhala-Jikelele uzakuzimasa umjikelo woMphathiswa. Oku kunomdla wakhe kwiiveki nje ezimbalwa ngaphambi kokuqinisekiswa kwakhe. Kulindeleke ukuba kujongwe ukuba uzakuqubisana neentatheli kwinkomfa noonondaba. Akukho simemo sinjalo sifunyenwe ngu eTurboNews okwangoku.
Kufuneka abonakale enomdla. Ke ngoko unyanzelisa ukuma kwe-PR ukukhokela isibhengezo se-COP 2021.
Ukuqinisekiswa kwakhona kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ngo-Novemba emva kokuba iBhunga eliLawulayo le-UNWTO liphinde lamnyula ngoJanuwari kwaba lula kakhulu kuZurab.
Ukuba ne-General Assembly eMadrid yile nto yayifunwa nguZurab ngalo lonke ixesha. I-Pololikashvili kufuneka ivuyisiswe njengeyona njongo iphambili kwezopolitiko.
Unokuqikelela ngokulula ukuba emva kokuba ephumelele ukuqinisekiswa kwindibano eMadrid, ishishini le-UNWTO liza kubuyela esiqhelweni kuye.
Ngokwesiqhelo kuthetha ukuthula, akukho uthethathethwano olunokuba luncedo, akukho bunkokeli buchaphazelekayo.
Kuthetha ukuthintela ukusebenzisana ne-WTTC kunye nomzi mveliso omkhulu wabucala, ukungahoyi imiba ye-COVID-19, kunye nokuqhubeka kugxila kumnqweno wakhe wezopolitiko wokuba yinkulumbuso yaseGeorgia.
Namhlanje urhulumente waseMorocco umhlangule ngokucima iNdibano yeZizwe eziManyene eMarrakesh.
Oku kwaxelwa kwangaphambili ngu eTurboNews kunye nemithombo yolwazi kangangexesha elithile.
Qaphela iVerbale idityanisiwe kumazwe angamaLungu e-UNWTO namhlanje (nge-Okt 23,2021)
Oonobhala boMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) benza izincomo zabo kwiLungu loMbutho kwaye banelungelo lokuyazisa ukuba, kwileta yomhla we-15 ku-Okthobha kwaye ifunyenwe kwi-UNWTO Secretariat ngomhla we-18 ku-Okthobha ka-2021, uRhulumente waseMorocco wanxibelelana no Oonobhala bokuba imeko yendalo yangoku enxulumene nobhubhane we-COVID-19 ayikuvumeli ukubanjwa kweseshini yama-24 yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo eMarrakesh ngo-2021 ngemihla ekuvunyelwene ngayo ngomhla wama-30 kuNovemba ukuya kwi-3 kweyoMnga kwezi meko zinika isiqinisekiso iimeko eziyimfuneko zempilo nezokhuseleko zabathathi-nxaxheba.
Oonobhala banqwenela ukukhumbula ukuba iseshoni yama-24 yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo iya kudibana ngo-2021 njengoko kwagqitywa yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ngesigqibo sama-727 (XXIII) kwiseshoni yama-23, ngokuhambelana neNqaku le-10 leMithetho kunye noMgaqo 1.1 weMigaqo yeNkqubo. yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
Ngokuhambelana negunya elithunyelwe phantsi kwesiKhokelo sokhetho lweendawo zeeseshoni zeNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezamkelwe yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ngesigqibo 631 (XX), ngenjongo yokuqinisekisa ukuqhubeka kwemisebenzi yoMbutho kwi-biennium 2022-2023 kunye ukusebenza ngokukuko kwamaZiko ayo ngokuhambelana neMithetho, nasemva kokubonisana noSihlalo weBhunga elinoLawulo oluPhezulu kunye noRhulumente waseSpain, oonobhala bonwabile ukwazisa ukuba iseshoni yama-24 yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo iya kubanjelwa eMadrid, ISpain, ikomkhulu loMbutho, kwangolo suku kunxityelelwana ngalo kuwo onke amaLungu eMibutho, oko kukuthi ngomhla wama-30 kuNovemba ukuya kumhla wesi-3 kweyoMnga yowama-2021.
Oonobhala boMbutho wezoKhenketho weHlabathi bazinika eli thuba lokuhlaziya aMazwe angamaLungu iziqinisekiso zokuqwalaselwa kwawo okuphezulu.
IMadrid, 23 ngo-Okthobha 2021